Ukugqithiswa kukuphulwa komsebenzi wesondlo samathumbu kubantwana baluphi na ubudala. Kubantwana abancinci abondliwa ngumama wabamama, ukugqithwa kubonwa ngaphantsi kwama-1-2 ngamaxesha emini, kubantwana abanesondlo sokufakelwa, ukungabikho kwesitulo samahora angama-24 ukuya kuma-36.
Izimpawu ezihlanganisiweyo zokuqhawulwa - ukubetha, ukukhala kunye nokuxhalaba komntwana, i-anorexia, ubomvu buso, xa umntwana ephosa kwaye akakwazi ukuphazamisa.
Izizathu zokuqhawulwa kwabantwana abancinci:
isondlo esingenangqiqo somama onesiko;
ubungakanani obaneleyo bamanzi, unxiliswe ngumntwana ngokusondeza ngokufanelekileyo kunye nokuqaliswa kweziqhwala kubantwana abancancisayo;
xa ukutshatyalaliswa kwangaphambili komntwana kwisondlo sokufakelwa, kunye nokudluliswa okungalunganga komntwana kumxube omnye ukuya komnye;
ukuba ukutya komntwana kuqule ukutya okuphezulu kwiiprotheyini kunye namafutha, apho umzimba womntwana awufumani kakuhle;
ukuthintela kwiprotheni yobisi lweenkomo, intlanzi, amaqanda, i-soy, ezinye izityalo;
ukungabikho kwe vithamini D;
kunye neyeza elide.
Yintoni endiyidlayo kumama ononomntwana ukuba umntwana unxunguba? Kubalulekile ukunciphisa inani lamafutha evela kwimfuyo, ukufaka endaweni yayo kunye neoli yemifuno. Kukho ukutya okuqulethe i-fiber-fruit-fruit, imifuno, isonka, okusanhlamvu - konke oku kunomphumo ozuzayo kwi-microstlora yamathumbu omntwana.
Yintoni engathandekiyo ukuyidla unina ongumhlengikazi kwaye luhlobo luni lokutya olufunekayo ukuze kubanjwe abantwana? Kucetyiswa ukuba ugweme iziqholo kunye neziqholo. I-Horseradish, pepper, igalikhi inokunika ukunambitheka okungenakulisayo kubisi, ngoko kungcono ukunciphisa ukusetyenziswa kwazo ekudleni kokuncinci, okanye ukukhuphela ngaphandle kokutya.
Ngokuqhelekileyo, umama kufuneka alandele ukutya okuhlukahlukeneyo kwaye alandele ngokukhawuleza ukusabela komntwana kule mimveliso okanye eminye imikhiqizo. Kwaye ukuba ngaba kukho nawuphi na owenza ukuba kubhentshwe kumntwana, colic, ukuphendula okuthe tye, ukuzithemba, ngoko ke, ukutya okunjalo kufuneka kukhishwe ngaphandle kokutya kwabo. Namela into oyidlayo kunye nendlela osabela ngayo kwiimveliso: ukuba unento ethile ekuthandeni, ukutshabalalisa, okanye kwinto eyanciphisa okanye eyomeleza, ulinde ukuphendula okufanayo emzimbeni nasemntwaneni wakho.
Kwaye ukuba umntwana usekutyeni, kwaye wayengakabi neenyanga ezintathu? Kule meko, luhlobo luni lokutya oluyimfuneko kubuncwane kubantwana? Kule minyaka ubudala kakhulu ukuthetha malunga nejusi kunye neziqhumane, eziqaliswa ekudleni kuphela emva kweenyanga ezine. Kanye kunye nezidakamizwa njengeSab-Simplex, i-Espumizan, i-Bebi Kalm, i-Plantex, i-Dufalak, njl., Isusa i-cost intestinal colic, ikhuthaza ukunyuka kwamathambo, ibe nefuthe le-laxative kunye nokunciphisa ukubhubhisa, kubantwana abasasazwayo kunye nabantwana abaxutywayo kunye nabasondezayo imixube eyahlukeneyo eyenza lula ukukhutshwa kwamathumbu nokumiselwa kwemisebenzi yayo.
Umxube we-Semper Bifidus 1 ngumzekelo wobisi obusitshintshiweyo kunye nezibonakaliso zokusetyenziswa: ukuqhekeza rhoqo; isitya esinomdla wokuzibetha (kwenzeka rhoqo imihla, kodwa ukuhambelana kwezitshixo kunzima - iifama "zezimvu"); emva kwenkqubo yokonyango; ukugcina i-microstlora yamathumbu emntwaneni.
Ukubunjwa komxube kubandakanya i-lactulose, enexabiso le-bifidogenic (ikhuthaza ukuphuhliswa kwe-lacto yayo kunye ne-bifidobacteria) kwaye ikhuthaza ukukhupha okulula ukukhupha intlungu kunye nokuhluthwa kwe-stool.
Kwiingcebiso zokusetyenziswa: umxube ulawulwa ukususela kwi-50 ml ngosuku lokuqala kwi-bhotile eyahlukeneyo phambi kokutya okuphambili (oko kukuthi, ukuba uhlala unika umntwana i-120 ml yomxube omkhulu, ngoko, xa ufaka i-Bifidus, 50 ml ye-Bifidus kufuneka inikezwe, kwaye ke i-70 ml eseleyo ye-mix evamile ), ilandelwa ukwanda kwimihla ngemihla ye-100-150 ml. Ukuba, emva kweentsuku ezimbalwa, isitulo siqhelekileyo, ngoko umlinganiselo wesondlo se-Bifidus kufuneka unciphise ngokusesikweni kwinqanaba elandelelanayo uze utshintshwe ngu-1-2 ukunyusa ngosuku.
I-Samper Bifidus ingasetyenziselwa ukutya okubalulekileyo komntwana, ithathe indawo yesi-2, 3, njl. ukondla, phambi kokumiselwa kwesigxina, okanye ngunyaka wokuqala wokuphila komntwana.
Xa usebenzisa le mveliso, i-stool iya kuba ngumntu omnye kathathu ngosuku, i-microstlora yamathumbu iqhelekile, ukuqhaqhaqhaqhaba kuyeka.
Ubumbano-Agusha-1 ubisi obomuncu - umxube olungelelanisiweyo kunye neprojetictic properties, kubantwana abavela kwiinyanga ezi-0 ukuya kwezi-6 (i-liquid, kwi-package ye-200 ml). Kujoliswe ekutyeni kokuxutywa kwabantwana. Ngaphambi kokuvula, iphakheji kufuneka ifuthe, kwaye inani elifunekayo lemveliso kufuneka litshulwe kwisibhotile esinyanzelisiweyo, emva kokufudumala kwindawo yokuhlambela ngamanzi ukuya kutshisa kwe-36-38`C. Iqukethe i-bifido- kunye ne-lactobacilli, ephucula ukuchithwa kwe-lactose kunye neprotheni. Ukukhuthaza inkqubo yokugaya, ukunciphisa umngcipheko weempendulo zokuguga, zenza i-microflora yamathumbu. Ubomi beShelf iintsuku ezili-10. Ungayigcine loo mveliso kwindawo evulekileyo yeeyure ezili-12.
Umxube obisi omuncu obomileyo weNAN ekuzalweni kunye ne-bifidobacteria. Ikhuthaza ukugaya, iqukethe isinyithi, ikhusela iintsholongwane zamathumbu, isomeleza isistim somzimba, inokuphucula i-digestion yamaminerali athile - isinyithi, i-calcium, i-zinc, kwaye ikhusela i-dysbacteriosis, apho umntwana angabanjwa khona kunye nesifo sohudo. Yenziwe nge-fermentation ne-lactic acid bacteria, umxube olinganiselayo owenzelwe ukondla abantwana abasempilo ngokuzalwa. Ukubunjwa kubandakanya zonke iimaminerali ezifunekayo kunye namavithamini ukuphuhliswa okuqhelekileyo kosana. Ukuhlanjululwa emanzini kunzima kunokuba kuxutywe imivumba, ibhotile kufuneka igungqiswe ngamandla kwaye ihambelane naloo bushushu bamanzi xa kuhlaziywa umxube, oboniswe kwimigaqo. Oogqirha bezilwanyana abacebisi ukusetyenziswa kobisi olunotyiweyo kunye ne-NAN njengomxube omkhulu wokondla umntwana, - isicelo 1-2 ngamaxesha anelisekile.
Kwakhona, ukuphucula ukugonya, umntwana ukhuthazwa ukumnika i- teaspoon 1 yokusela amanzi abilisiwe 5 imizuzu ngaphambi kokutya.
Umdala oba ngumntwana, kulula ukuba umama akwazi ukujamelana nokuqhawulwa kwengane, ukuba, ngokuqinisekileyo, izimbangela zokuqhawuka zizinto ezibonakalayo. Xa umntwana efika ezinyangeni ezintathu ubudala, sele kusenokwenzeka ukuzisa ukutya okuncedisayo kwaye oku kunceda kakhulu isisombululo seengxaki ngokuqhaqha. Unako ukunika iindizi, iizambane ezifihliweyo (kubandakanywa iinduna kunye neebhunge). Ubilise uketshezi lwamanzi ebisi lweenkomo, iiveki zokuqala zobisi kufuneka zihlanjululwe ngesigamu ngamanzi. Umphumo omuhle kakhulu kumathambo omzimba unesifo se- oatmeal , ukutya kwansuku zonke kwe-oatmeal kuvumela ukuba i-stool yengane. Ukususela kwiinyanga ezi-6 ungangena kwisondlo se-cottage cheese yabantwana, kunye nabantwana aba-8 bokusela i-yoghurts.
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo ne-giardiasis
Iidrafers zabantwana abaselula
I-Biography yomdlali weListra u-Udovichenko
Uyise kaZhanna Friske uceba ukucima uDmitry Shepelev ekhaya kwidolophu
Isitayela saseYiputa ngaphakathi
Kutheni amadoda engathandi abantwana?
Indlela yokuchitha kwindawo yokuhlambela
UMeryem Uzerli, i-biography ye-Hurrem enkulu
Imfihlelo yoLutsha: Thatha i-Totale Multi-Perfection Crème yi-Dior
Indlela yokulungisa iinwele ezonakaliswe ekhaya: 4 zokupheka ezifanelekileyo